Ego ulo oru Cannabis | Onye ọka iwu Cannabis | Tom Howard
Ọ bụ ihe karịrị afọ iri abụọ ugbu a kemgbe Kalịịnịa nyere ikike ịre wii wii ọgwụ na ire ya. N'ime afọ 20, steeti 20 ọzọ abanyela na bandwagon, a na-anabatakwa ị mariụ wii wii ọgwụ.
Iji lebara anya na -agawanye n'ọtụtụ ebe, e webatala ahịa azụmahịa wii wii n'akụkụ dị iche iche nke obodo a. N'ihi nke a, azụmaahịa etolitela nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga, ngwaahịa ndị metụtara, gụnyere ebuka, adọtawo mmasị nke ndị na - etinye ego n'ofe ụwa.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ wii wii bụ ihe na-enye ezigbo ego, ụlọ ọrụ ole na ole adaala n'oge gara aga n'ihi ọtụtụ ihe. Ma gịnị ga-eme mgbe azụmahịa wii wii anaghị enwe ihe ịga nke ọma? Ha nwere nhọrọ ịdegara maka odida, dị ka azụmahịa ọ bụla ọzọ?
N'okpuru ebe a, anyị leba anya na nkwarụ ego cannabis, yana nhọrọ dịnụ maka ndị na - etinye ego nke azụmahịa ha na-akụghasị ma ọ bụ nwee ihe ịga nke ọma.
Otu n'ime ọtụtụ nhọrọ dị maka azụmaahịa na-ada bụ ịgba akwụkwọ maka nchebe mkpuchi. Site na mkpesa maka odida ụlọ akụ, ụlọ ọrụ ndị a abụghị naanị iwepụ ụgwọ, mana ọ na-adịrị ha mfe iji hazie obere ego. Na nwute, nhọrọ a adịghị maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ wii wii.
Ugbu a, azụmaahịa wii wii anaghị eru eru maka nchebe enweghị ego Federal. Nke a metụtara na steeti ebe ite dị n'iwu. Nkwenye bụ na ọ bụrụhaala na wii wii ka bụ ihe a na-achịkwa, gọọmentị anaghị echekwa ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ a mgbe ọ na-emebi odida.
Nke a bụ n'ihi na a na-anụ ikpe niile gbasara enweghị ego n'ụlọikpe etiti. Agbanyeghị, n'okpuru Iwu Nchịkwa A Na-achịkwa, a ka na-atụle wii wii ka ọ bụrụ usoro mbu nke ọgwụ, nke pụtara na ọ bụ iwu na-akwadoghị itolite, kesaa ma ọ bụ depụta ya.
Ebe ọ bụ na iwu gọọmentị etiti na-achịkwa enweghị ego, ọ gaghị ekwe omume Onye Isi Ewupu Ego US ka ọ na-eduzi ma ọ bụ na-ejikwa akụ na-ahụta ka enweghị iwu na-enweghị imebi iwu.
Ọ bụ ezie na nke a na-etinye ndị etinye ego na azụmaahịa wii wii na ọghọm, olileanya anaghị ada ada. Enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ maka azụmahịa cannabis adịghị ewepụ dị ka a tụrụ anya ya. Ha gụnyere:
Nhọrọ a gụnyere ịgbanwe ngwongwo azụmaahịa ka ọ bụrụ ego, enwere ike iji mezie ụgwọ ndị kwụrụ ụgwọ. Liquid bụ nke afọ ofufo ma ọ bụ mmanye, ya na ụzọ dị iche iche esi abanye n'ụdị mmezi a dị iche.
N'ihe banyere mmanye mmanye, a na-etinye ụlọ ikpe. Ndị ahụ na-akwụ ụgwọ rịọrọ ụlọ ikpe ka ha nye ụlọ ọrụ ahụ ọrụ. Nke a na - abụkarị mgbe ndị ọrụ ụgwọ kwenyere na ụlọ ọrụ ahụ nọ na ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ.
Inye ego nkwadobe, ụlọ ikpe adịghị etinye aka. Ọ bụ ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ na-ebido usoro mmịpụta ahụ mgbe ọ pụtara ìhè na ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe oge siri ike ịkwụ ụgwọ ndị ahụ. N'ọnọdụ ka ukwuu, ụlọ ọrụ ahụ na-enwe ike idozi ụgwọ niile mgbe mmiri wụsịrị.
Ozugbo a rụchara mmiri mmiri, ụlọ ọrụ ahụ ga-agbaze. Ogologo oge nke ịwụ mmiri dịgasị iche dabere na azụmahịa siri ike, n'etiti ihe ndị ọzọ. Usoro a na-akpọkarị maka itinye aka nke ọkachamara na insolvency, onye ọrụ ya bụ inye ndụmọdụ banyere ihe ndị a ga - eme na usoro dị iche iche nke usoro ịationụ mmiri.
Ọzọ nhọrọ dị maka ndị nọ n’ahịa ite bụ nnata. Iversnata ego bụ usoro eji eme ka ndị o jiri ụgwọ wee bụrụ nke onye nwe ya.
A na-ahọpụta onye tụkwasịrị obi si azụmaahịa ka ọ bụrụ onye na-anabata ma resị ngwaahịa wii wii n'okpuru nkwenye ikpe. Usoro a na - abụkarị mgbe ndị ji ụgwọ na ndị ji ụgwọ kwenyechara usoro kachasị mma iji mee mgbe ị na - eche na enweghị ego
Ọ bụ ezie na ịnata ego abụghị ihe a na-ahụkarị, ọ nwere ike inyere ndị ji ụgwọ aka ịpụ ụgwọ ụgwọ ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ndị ji ụgwọ na-atụfu ihe ha nwere, usoro ahụ na-eme ka o kwe ndị kwụrụ ụgwọ iweghachite ego ha.
Ọ dị mkpa iburu n’obi na onye na-anabata ya na-eme ihe dabere na ọmụrụ nwa ya. Nke a apụtaghị na onye nwe ụlọ ahịa enweghị ike inye nduzi ha, ọkachasị n'ụdị ndị ahụ pụrụ iche dịka ịchụ azụmaahịa. Enwere ọtụtụ ụzọ enwere ike iji onye nwe ahịa iji mee ka uru ya bara ụba wee hụ na afọ ojuju ndị na-agbazinye ego na njedebe nke usoro.
Ize ndụ maka azụmaahịa Marijuana
Eziokwu ahụ na ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ a anaghị eru eru maka ịgba akwụkwọ maka itinye ego gọọmentị etiti na-eme ka ndị na-agbazinye ego na-eche na ị ga-akwụgo otuto maka ha. Ndi ulo oru gbazinyere amara nke oma na oburu na azuma ahia a aba, ohere inwetaghachi ego ha pere mpe.
N'ezie, ndị ọchụnta ego na-enwe ihe ịga nke ọma ịnweta nbinye ego site n'aka ụlọ ọrụ ịgbazinye ego na-akwụkarị ụgwọ ọmụrụ nwa dị elu ma e jiri ya tụnyere azụmahịa ndị ọzọ.
Industrylọ ọrụ wii wii na-echekwa ihe ize ndụ ndị ọzọ nke ndị ịchụ ego kwesịrị ịmara anya. Iwu na-achịkwa ịre wii wii na-aga n'ihu na-abawanye, ndị na-achụ ego ga-agbanwu mgbanwe ndị a. Ọ bụrụ na emebi iwu mgbe ha na-azụmaahịa, ọ dịịrị ha mfe iwepu akwụkwọ ikike cannabis ha.
Dịka otu a, ọ dị mkpa maka azụmaahịa wii wii na-arụkọ ọrụ n'aka ndị ọka iwu nwere ahụmahụ nwere ike inye ndụmọdụ gbasara iwu mgbe ọ bụla ọ dị mkpa.
Ozi ọma ahụ bụ na ụlọ ọrụ igbo na-aga n’ihu, nke pụtara na ndị na-abanye n’ụlọ ọrụ yikarịrị ka ha ga-eme nke ọma ma mụbaa itinye ego ha n'ime obere oge.
Anyị bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke dị na Peoria, Illinois. Aha m bụ Attorney Thomas Howard. M ọkachamara na okwu iwu ụlọ ọrụ cannabis ma soro ndị otu ndị ọka iwu ruru eru na-enye ndị na-etinye ego na azụmaahịa marijuana ndụmọdụ.
Ọ bụrụ na azụmaahịa cannabis gị na-eche nsogbu mmebi ego, kpọtụrụ anyị. Anyị agaghị na-enye ndụmọdụ mana anyị na ndị gị na ya kwụrụ ụgwọ ga-ekwurita iji hụ na ndị otu a na-eme ihe kachasị mma.
Anyị ghọtara etu nsogbu ndị ụgwọ ji nwere ike isi na-eche, karịchaa ma ọ bụrụ na ịnwere oke nhọrọ iji chekwaa azụmaahịa gị. Anyị maara na n’agbanyeghi na ihe nwere ike ịdị ka ihe siri ike, enwere ụzọ ọ ga - esi pụọ. Anyị nwere ndị otu ọkachamara ga-agabiga akwụkwọ gị ma nyere gị aka ime mkpebi nwere nghọta.
Anyị raara onwe anyị nye ịme ka ọ dịrị gị mfe ịme azụmahịa ma dozie ọtụtụ nsogbu dị na ụlọ ọrụ wii wii. Kpọtụrụ ụlọ ọrụ iwu anyị dị na Illinois, anyị ga-enyekwa ndụmọdụ bara uru banyere otu ị ga - esi nweta nsogbu onwe gị na nrụgide dị ntakịrị n'aka ndị i ji ụgwọ.